トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mandaitra pachinko nanangona vaovao mampiasa ny P-WORLD
Tsara ny pachinko dia, mihevitra aho fa dia be dia be ny olona izay mampiasa ny t-izao tontolo izao. A maimaim-poana toerana, ka na iza na iza dia afaka jerena mora foana, dia mba hanangona ny vaovao ilaina no lasa toerana.
Ao amin'ny t-izao tontolo izao, mazava ho azy fa dia vaovao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny vaovao sy ny modely farany manerana ny firenena, orinasa vaovao sy Xintai sy ny fanesorana latabatra filaharana, sns, avy amin'ny fampahalalana isan-karazany no navoaka. Koa izao tontolo izao t-dia fanta-daza ihany koa ny toerana izay manamarina ny pachinko orinasa manam-pahefana, pachinko parlors izay voasoratra anarana tamin'ny toerana ity, heveriko fa misy ihany koa ny 80%.
ny firenena ihany koa amin'ny malaza, ity toerana vaovao pachinko, tiantsika ny hijery ny fomba mahay mampiasa. t-izao tontolo izao, na dia tsy mandeha any amin'ny pachinko efi-trano, fivarotana zava-nitranga sy ny Xintai vaovao, na, fametrahana modely, sns, dia afaka mora foana hanangona ny vaovao rehetra izay Avy amin'ny pachinko parlors.
Indrindra indrindra, ny laharan'ny latabatra sy ny fanesorana Xintai, satria tsy hita ao amin'ny fanazavana hafa, Xintai, toy ny lazan'ny taratasim-bola koa afaka hanangona vaovao mialoha. Ankoatra izany, orinasa vaovao ihany koa ny t-vaovao izao tontolo izao tsy manam-paharoa.
izay ny mpanamboatra solosaina inona no modely, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fitsapana na, amin'ny alalan'ny fanangonana ny fanazavana teo aloha, dia afaka nilaza mialoha koa ny fampidirana ny Xintai. Ary modely vaovao ny t-izao tontolo izao, mandra-latabatra nampiasaina avy amin'ny modely farany, azo atao ny mitady na modely, satria mifandray ihany koa ny mpanamboatra ny tranonkala, dia afaka mora foana tsipiriany bebe kokoa hanangona modely vaovao.
toy izany, dia mihevitra fa mahomby ny vaovao manokana amin'ny toerana iray ao amin'ny orinasa, dia afaka manangona fanazavana fanampiny haingana.
ary, tsara indrindra mba hanararaotra izany toerana, dia heveriko fa ny fotoana tena handeha hilalao. Raha handeha namely ny slingshot, dia tokony ho voalohany fivarotana hisafidy. Tamin'izany andro izany, dia tena ilaina ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko vaovao manerana ny firenena. Rehefa avy nanapa-kevitra ny faritra izay Handeha aho
, jereo aloha Place te vaovao, dia nametraka modely sy ny zava-mitranga. Ny fanamarinana ny fametrahana modely, inona no modely ny peta-drindrina solosaina modely, na nanisy hery Na izany na tsy specs hijery ny Matasupekku, ihany koa, avy amin'ny fametrahana fepetra arahana modely, dia tsy misy Izahay pachinko na dia ao amin'ny fivarotana, dia afaka pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny fanavotana tahan'ny dia mialoha amin'ny lafiny sasany.
vaovao sy ny hetsika dia hanohy hanamarina sy ny hafanana ny hetsika sy ny zava-mitranga modely. Raha ny marina na ambaratongam-fantsika fanitsiana, no karazana rivo-piainana ny, tsy fantatro ho any amin'ny efi-trano pachinko tokoa fa, amin'ny alalan'ny handeha hanangona, fara fahakeliny, ny vaovao, ny modely voafidy lasa malefaka, fahaverezan'ny fotoana tsy voatery ho.
tahan'ny By fiovam-po dia afaka mialoha, araka ny fomba tsy hilalao karazana ihany ny hetsika, mikendry koa dia ho afaka ny ho nanapa-kevitra eo anoloan'ny modely. Tamin'izany fomba izany, dia tsy misy efitra, sy mahay mampiasa ny fanazavana ny t-izao tontolo izao, dia mety ho tianao koa ny miezaka mba handefa pachinko fiainana.